Afar sano kadib beentii Farmaajo oo bannanka timid | KEYDMEDIA ONLINE
Dhabar-jabkii ugu weynaa ee siyaasadeed ayaa soo gaaray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kadib mauddo afar sano ah oo uu isku qarinayay daaha gadiishiisa, dadkana u sheegayay been la dhoodhoobay oo aan bayd run ka ahayn.
Ka hor inta uusan ku guuleysan xilka Madaxweynaha Soomaaliya, Farmaajo, wuxuu gaday aragti ah inuu neceb yahay Itoobiya, wuxuuna fagaare kasta ka sheegi jiray in cadawga ugu weyn ee dalku leeyahay uu yahay Xabshida degan Waqoyiga Soomaaliya.
Nasiib-xumo, taas baddalkeeda ayuu ku dhaqaaqay markii loo dhiibay majaraha waddanka, wuxuuna saaxiib dhow la noqday RW Itoobiya Abiy Axmed iyo Kalitaliyaha hoggaamiya Eritrea Isaias Afwerki, isagoo la galay heshiisyo qarsoodi ah, oo dhamaantood dhawaan bannaanka u soo bixi doona.
Keydmedia Online, ayaa billowgii sanadkaan baahisay in askar Soomaali ah ka dagaalameen gudaha Itoobiya, hayeeshee maalin kadib, Wasiirka Wasaarradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe, oo marin habaabinayay xaqiiqda arrinkaan, ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in askar Soomaaliyeed oo tababar loogu diray dalka Eritrea ay ku dhinteen dagaalkii ciidamada difaaca Itoobiya iyo Jabhadda TPLF.
Maalin kadib, Mar kale, KON, waxa ay bannaanka keentay xog xaqiiq ah oo ay ka heshay ilo sirdoon oo muhiim ah, taas oo ahayd in arrinta ciidamada Soomaaliya dardeed, ay taliyaha militariga Ethiopia gaar ahaan qeybta Oromada iyo taliyaha Sirdonka wadanka Eritrea, soo gareen Muqdisho, isla-markaana Xarunta Hay'adda Nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka NISA ee Habar Khadiija, ay kulan kula yeesheen agaasimaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
Wixii xilligaas ka danbeeyay, waxaa billowday kacdoon waalid, waxayna Dowladda Farmaajo ku qasbanaatay in ay Dowladda Itoobiya ka codsato marin habaabinta arrinkaas, beenisana in ciidamo Soomaali ah ka qeyb qaateen dagaalkii gobolka Tigrey, taas oo sababtay in Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya, Danjire Dina Mufti, uu sheego in aysan waxba ka jirin in ciidamo ajanabi ah ay ka qeyb qaateen dagaalka ka dhacay Itoobiya.
Farmaajo arrinkaas waa ka aamusay, wuxuuna ka soo qaaday in uu la mid ah danbiyadii uu horay afka uga xiratay, nasiib wanaagse, been kasta waxaa ka danbeysa run, waxaana ugu danbeyn soo baxday xaqiiqda arrinkaas, kadib markii Qaramada Midoobay ay shaacsay in la helay caddeymo muujinaya in ciidamo Soomaaliyeed la geeyay waqooyiga Itoobiya.
Warbixin ka soo baxaday Ergo uu Golaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay, u saaray ka warbinta xaaladaha gobolka Tigray ee dalka Ttoobiya, ayaa lagu sheegay in ciidamo Soomaali ah oo tababar u joogay dalka Eritrea loo daabullay dagaalkii sanadkii hore ka qarxay gobolka dhaca waqooyiga waddankaas.
Warbixinta ayaa lagu xusay in la helay macluumaad muujinaya in askarta Soomaalida laga daad gureeyay xurumihii ay ku tababaranayeen ee ku yaallay Eritrea, lana geeyay agagaarka degaanka Aksum ee Gobolka Tigrayga, halkaas oo dagaallo qaraar ka dhaceen dhamaadkii sanadkii hore.
Tani waxa ay bannanka keentay beenta Farmaajo iyo xishood la’aanta kooxda ku xeeran ee Fahad iyo Cismaan Dubbe, ugu horreeyaan, warbixinta Ergada uu Golaha Xuquuqul Insaanku u saaray ka warbinta xaaladaha gobolka Tigray, waxa ay soo xireysaa rajadii Farmaajo ee doorashada soo socota, waxaana lagu soo oogi karaa khiyaano qaran, maadaama uu halligay nafta kumanaan dhalinyaro ah.